Macdanta King Solomon (qaybta 16), Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Macdanta Boqor Sulaymaan <abbr> (Qaybta 16)
Waxaan dhawaan booqday guriga waalidkey iyo iskuulka. Xusuustii way soo noqotay waxaanan u rajaynayay maalmihii hore wanaagsan. Laakiin maalmahaas waa dhammaadeen. Xannaanadu waxay bilaabatay oo joogsatay. Ka qalin-jabinta dugsiga waxaa loola jeedaa in aad tiraahdo nabadgalyo iyo soo dhaweyn waayo-aragnimo nolosha cusub ah. Qaar ka mid ah waaya-aragnimadaas waxay ahaayeen kuwo xiiso badan, kuwo kale oo xanuun badan oo xitaa cabsi badan. Laakiin ha fiicnaato ama ha xumaato, ha gaaban ama dheer, Waxaan bartay hal shay: inaan ku sii socdo jidka, maxaa yeelay isbeddelada ku lug leh waa qayb dabiici ah oo nolosheena ah.
Fikradda safarka ayaa sidoo kale udub dhexaad u ah Kitaabka Quduuska ah. Baybalku wuxuu noloshu ku tilmaamay inay tahay waddo wakhtiyo kala duwan leh iyo waaya-aragnimo nololeed oo leh bilow iyo dhammaad. Baybalku wuxuu ka hadlayaa isbedel halkan. Nuux iyo Enoog wuxuu la socday Ilaah (Bilowgii 1: 5,22-24; 6,9: 99). Markuu Ibraahim jiray sano, Ilaah wuxuu yidhi waa inuu hortiisa ku socdaa (Bilowgii 1:17,1). Sannado badan ka dib, reer binu Israa'iil waxay ka soo carareen addoonsigii Masar iyo dhulkii loo ballanqaaday.
Axdiga Cusubi, Bawlos wuxuu Masiixiyiinta kula dardaarmayaa inay ku noolaadaan si sharaf leh markii loo yeedhay (Efesos 4,1). Ciise wuxuu yidhi isaga qudhiisu waa jidka wuxuuna nagu martiqaadayaa inaan raacno. Rumaystayaashii hore waxay isu yeeri jireen kuwa raacsan dariiqa cusub (Falimaha Rasuullada 9,2). Waa wax xiiso leh in safarada badankood ee lagu sharaxay Baybalka ay la xiriiraan la socodka Ilaah. Sidaa daraadeed: Eebbe hore ula soco oo raac noloshaada oo dhan.
Baybalku wuxuu muhiimad weyn siiyaa in la socdo. Sidaa darteed waa inaanay layaab noo noqon in odhaah caan ah looguna talo galay mawduucaan: “Rabbiga ku aamin qalbigaaga oo dhan, oo ha isku hallayn maskaxdaada, laakiin ku soo xusuusnow jidadkaaga oo dhan, isaga ayaa kuu hagaya. » (Maahmaahyadii 3,5: 6)
"Ku kalsoonow qalbigaaga oo dhan Rabbiga," ayuu Sulaymaan ku qoray aayadda 5aad, "oo ha isku hallayn maskaxdaada" iyo "jidadkaaga oo dhan" isaga xusuuso. Siyaabaha halkan micnaheedu yahay safar. Kulligeen waxaan leenahay safarro shaqsiyadeed oo gaar ah, kuwanu waa safarro ku saabsan safarkan weyn ee nolosha. Safarro ay iskaga gudbaan safarada dadka kale. Safarku wuxuu kujiraa isbadal cilaaqaad iyo waqtiyo jirro iyo caafimaad. Safarka ayaa bilaabmaya oo safarku wuu dhammaanayaa.
Baybalku wuxuu noo sheegayaa safarro badan oo shakhsi ah oo ay dadku sameeyaan, sida Muuse, Yuusuf, iyo Daa'uud. Rasuul Bawlos wuxuu ku safrayay Dimishaq markii uu la kulmay Ciise sara kacay. Dhowr daqiiqadood gudahood, jihada safarkiisa noloshiisa si aad ah bay isu badaleen - dhawr siyaabood. Safarrada qaar ayaa la mid ah. Annagu uma qorsheysanno. Shalay waxay ku socotey hal jiho maantana wax walbana way isbedeleen .. Paulus wuxuu safarkiisa ku bilaabay inuu noqdo mid ka soo horjeedda iimaanka Masiixiyiinta oo ay ka buuxaan qadhaadh iyo nacayb iyo rabitaan uu ku burburiyo masiixiga. Wuxuu ku soo afjaray safarkiisa maahan kaliya Masiixi ahaan, laakiin wuxuu u ahaa ninka sida warka wanaagsan u faafiya Masiixa adduunka oo dhan safarro kala duwan oo adag. Ka waran safarkaaga? Xagee u socotaa
Wadnaha oo aan madaxa aheyn
Aayadda lixaad waxaan ka helnaa jawaabta tan: "Xusuusnow". Erayga Cibraaniga ah ee jada waxaa loola jeedaa in la garto ama la ogaado. Waa eray muhiima weyn lehna waxaa ka mid ah in qof qof lagu barto iyadoo la eegayo, milicsiga iyo khibradda. Ka soo horjeedaa waxay noqon doontaa in qof lagu barto iyada oo loo marayo dhinac saddexaad. Waa farqiga u dhexeeya cilaaqaadka ardayga iyo maaddada uu baranayo - iyo xiriirka ka dhexeeya labada qof ee isqaba. Aqoontaas ku saabsan Ilaah lagama helo ugu horrayn madaxayaga, laakiin waxa ugu sarreeya dhammaanteenna qalbigayaga.
Markaa Sulaymaan wuxuu leeyahay inaad barataan Ilaah (jada) hadaad jidkaaga nolosha raacdo. Hadafkani had iyo jeer waa inta lagu gudajiro wuxuuna ku saabsan yahay sidii aad ku baran lahayd Ciise safarkan oo aad Ilaahay ugaga sheekayn doontaa dhammaanba. Dhamaan safarada qorsheysan iyo kuwa aan qorsheysanba, safarada u weecda kuwo dhamaaday maxaa yeelay waxaad qaadatey jihada qaldan. Ciise wuxuu jeclaan lahaa inuu kugu raaco safarada maalinlaha ah ee nolosha caadiga ah isla markaana saaxiib kula noqdo.
Sideen uga helnaa aqoontaas xagga Eebbe? Maxaad wax uga baran weyday ciise oo aad ugaheli laheed meel ka xasil badan fikradaha iyo waxyaalaha aad maalinba maalinta kahoreysid ee Allah hortiis usheegto maxaad u damin weyday TV-ga ama taleefanka gacanta saacad badhkeed? Qaado waqti aad keligaa la joogtid Ilaah, inaad dhagaysanaysid isaga, oo aad isaga ku nasatid, aad ka fikirtid oo aad isaga u tukatid (Sabuurradii 37,7). Waxaan jeclaan lahaa inaan kugu dhiiri geliyo inaad Efesos 3,19 ka dhigto ducadaada nolosha shaqsiyeed. Bawlos wuxuu tukanayaa tan: «Inuu aqoonsado jacaylka Ilaah, oo aad uga sareeya aqoonta oo dhan, si aannu uga buuxsanno Ilaah oo dhan buuxnaantiisa.
“Sulaymaan wuxuu dhahaa in Ilaah na hagayo. Si kastaba ha noqotee, tan micnaheedu maahan in dariiqa aan ku qaadno Ilaahay mid fudud, oo aan lahayn xanuun, silica iyo amni-darrada. Xitaa waqtiyada adag, Ilaah ayaa ku quudin doona, kugu dhiirigelin doona kuna barakayn doona joogitaankiisa iyo xooggiisa.
Macdanta Boqor Sulaymaan (Qaybta 16aad)